इन्स्टाग्राममा मेरा भिडियोहरू कसले देख्छन्? 🥇 अनुयायीहरू ▷ 🥇
इन्स्टाग्रामले हामीलाई धेरै सामग्री साझा गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै भिडियोहरू, त्यहाँ जोहरू यस प्लेटफर्ममा अपलोड गर्ने र केहि घण्टा हेर्ने फ्यान हुन्। यद्यपि, डिजिटल विश्वमा गोपनीयता एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो वा कम्तिमा सचेत हुनुहोस् "कसले मेरा भिडियोहरू इन्स्टाग्राममा हेर्छ"। जहाँबाट त्यहाँ श doubts्का हुन सक्छ कि मान्छे तपाइँ पछ्याउँछन् वा गर्दैनन्, यो कत्तिको लोकप्रिय छ कि यो प्रजनन हुन सक्छ वा यदि यसलाई अरू केहि प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यी अज्ञातहरूको सब भन्दा सही उत्तर भनेको त्यो हो तपाइँले आफ्नो भिडियोहरू कसले हेर्न सक्नुहुन्न थाहा छकम्तिमा ती होइन जुन तपाईले आफ्नो फिडमा अपलोड गर्नुभयो। तर त्यहाँ हाम्रो भिडियोहरू खेल्नेहरू चिन्नको लागि धेरै तरिकाहरू छन्। र त्यसपछि म वर्णन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दछ कसरी दृश्यहरू थप विवरण प्राप्त गर्न गणना गरिन्छ।
दृश्यहरू, कसले मेरा भिडियोहरू इन्स्टाग्राममा हेर्छन्?
दृश्यले मात्र एक तरीकाले काम गर्दछ, दर्शक पास गर्नुपर्नेछ न्यूनतम5सेकेन्ड भिडियो हेर्दै त्यसोभए तपाईं त्यस्तै गणना गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा इन्स्टाग्राममा गनिएको एउटै मात्र चीज यी5सेकेन्ड हो, किनकि यो "मनपर्दो" वा भिडियो प्रयोगकर्ताहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रतिक्रियाहरूबाट स्वतन्त्र छ।
तर यसको भिडियोहरू हेर्नको लागि सामान्य छ महान लोकप्रियता को साथ खाताहरु एक कुल संख्या "मनपराउँदछ" को कुल प्रजनन को। र यो कारणले हुन सक्छ Bots वा ती प्रयोगकर्ताहरू जसले दोस्रो एक्सएनयूएमएक्स रोक्दैनन् भिडियो हेर्नको लागि जब उनीहरूले पहिले नै यसलाई "मनपराएका" छन्। यो पनि भन्नु आवश्यक छ, यद्यपि प्रयोगकर्ताले धेरै पटक उही भिडियो प्ले गर्दछ, प्रदर्शन मात्र एक हुनेछ।
यति मात्र तपाईले आफ्नो भिडियो "मनपराउनु भएको" लाई देख्न सक्नुहुन्छ, जोले केवल यो देखेका छन् देखा पर्दैन जब तपाईं "दृश्य" मा क्लिक गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि 300 व्यक्तिले तपाईंको भिडियो प्ले गरेको छ, तर मात्र 50 ले यसलाई "दृश्यहरू" मा "मनपराउँदछ", ती 50 व्यक्तिहरू मात्र प्रतिबिम्बित हुनेछन्, अन्य 250 लुकाइनेछ
मेरो भिडियोहरू इन्स्टाग्राममा कसले हेर्दछन् भनेर कथाहरू हेर्दै
अर्कोतर्फ, यस सामाजिक नेटवर्क को कथाहरू मा मामला धेरै फरक छ, किनभने यो प्रकार्य मा यदि तपाईले "इन्स्टाग्राममा मेरा भिडियोहरू कसले हेर्न सक्छ" भन्ने प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भने।
यो जान्नको लागि तपाईंले भिडियो प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र तल बायाँ क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ केही सर्कलहरू प्रयोगकर्ता प्रोफाइल फोटोहरूको साथ देखा पर्दछ। एकचोटि तपाईंले यो थिच्नुभयो भने,aव्यक्ति र पृष्ठहरू छन् कि भिडियो हेरेको पूरा सूची तपाईंले आफ्नो कथामा अपलोड गर्नुभयो
यदि तपाइँको मामलामा तपाइँ अधिक जान्न को लागी तपाइँको भिडियोहरु को लागी जान्न चाहानुहुन्छ अनुयायीहरू वा तपाइँको श्रोतामा रहेको ग्रहणशीलता थाहा पाउनुहुन्छ, तपाइँलाई इन्स्टाग्राम भिडियोहरूको लागि प्रयोग गरिएको मेट्रिक्स थाहा हुनुपर्दछ।
इन्स्टाग्राममा कसरी भिडियो मापन गर्ने?
जब भिडियो मेट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्दै, यो किनभने हो हामीले उत्पादन गरिरहेका सामग्री गुणस्तरीय छन्यसमा दुबै समय र पैसा लगानी गर्दै, त्यस कारणका लागि तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि यो उत्तम सम्भव छ।
यदि तपाईं डिजिटल मार्केटिंग अभियान सिर्जना गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो सफल हुनको लागि यो क्वान्टिफिएबल हुनुपर्दछ, यस समयमा भिडियो मेट्रिक्स प्रविष्ट गर्नुहोस्। र ती सबैलाई हामी निम्न प in्क्तिहरूमा व्याख्या गर्नेछौं।
एक भिडियो कती लोकप्रिय छ र कत्ति ग्रहणक्षमता हो भनेर निर्धारण गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका तपाईले लिनु भएको भ्रमणहरूको गन्ती। र माथि उल्लेख गरिए अनुसार, प्रदर्शन गणना गर्दछ जब5सेकेन्ड भिडियोको अगाडि बित्यो।
विस्तारित भ्रमणहरूको संख्या
विस्तारित भ्रमण गणना अधिक महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले भ्रमण गणनालाई विस्तार गर्दछ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले5सेकेन्डको लागि भिडियो हेर्न सक्दछन् तर जब उनीहरू भिडियो 60 दोस्रो वा अधिकको लागि हेर्छन्, सूचित गर्दछ कि सामग्रीले दर्शकको ध्यान समातेको छ, त्यसकारण यो इन्स्टाग्राममा भ्रमणहरू नाप्नका लागि अधिक उपयोगी उपाय हो।
भिडियो प्लेब्याक गति
यस प्रजनन दरले व्यक्तिलाई कति माफ गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जसले भिडियो हेरेका थिए र यो कसरी प्रासंगिक छ परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ यसको स्थानको प्रभावकारिता।
यसले व्यक्तिले भिडियोमा हेरेको समयको कुल मात्रा झल्काउँछ। र यस समय, इन्स्टाग्रामले तपाईंले साझा गर्नुभएको सामग्रीको अधिक मान गर्दछ।
यस अवस्थामा, यो दर कति व्यक्तिको छ भनेर संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ यो समाप्त नभएसम्म भिडियो हेरिरहनुभयो। यस अर्थमा यो मेट्रिक इन्स्टाग्राममा भिडियोको प्रवाह, गुणस्तर र उत्पादन वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यो त्यस्तो उपाय हो जुन प्लेब्याक दर, प्लेब्याक समय र भिडियोको समाप्ति दर समावेश गर्दछ, सामग्री कत्ति राम्रो छ वा छैन भनि भन्न।
रेटिंग्स को लागी क्लिक गर्नुहोस्
यी क्लिकहरूसँग सम्झौता भिडियो भित्र लिइएको कुनै पनि कार्यको प्रभावकारिता नाप्नुहोस्। त्यो हो, यदि कोहीले तपाईंको भिडियोहरू मध्ये कुनै एक हेराई गर्दैछ र कुनै पनि कार्य लिदैन भने, तपाईंले उपकरणहरू खोज्नुपर्नेछ वा आगन्तुकहरूको ध्यान पाउन सामग्रीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ।
यो दर भिडियोको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन उत्पादनलाई बढावा दिने काम गर्दछ, त्यसैले यसले भिडियोलाई धन्यवाद खरीद गरेको रकम मापन गर्दछ।
यो दर्शकहरूसँग भिडियोको प्रतिक्रियाको सूचक हो। उदाहरण को लागी, टिप्पणीहरु, कुराकानीहरु, सामाजिक उल्लेखहरु को लागी कुनै सीधा टिप्पणीहरु अन्य सामाजिक नेटवर्कहरु को लागी, अन्यहरु को लागी।
तिनीहरू सोशल मिडिया मार्केटिंगको मुख्य मानिन्छ, इन्स्टाग्राममा यसले सामग्रीको क्षमताको मापन गर्दछ श्रोतालाई यसलाई साझा गर्न को लागी र सक्रिय रूपमा यसलाई प्रमोट गर्नुहोस्। यस अर्थमा यो भन्न सकिन्छ कि यो यो प्लेटफर्ममा भिडियोको मुख्य उद्देश्य हो।
अब, हामी गुणवत्ता सामग्रीको साथ भिडियो परिभाषित गर्न इन्स्टाग्रामले प्रयोग गर्ने उपायहरूको बारे हामीलाई थाहा छ। तर अब हामी तपाईंलाई केहि सुझावहरू दिनेछौं जुन तपाईंको भिडियोहरू अपलोड गर्दा उपयोगी हुन्छ।
धेरै क्लिपहरूको साथ भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
जब तपाईं धेरै दृश्यहरूमा कथा भन्न चाहानुहुन्छ, यो टिपले तपाईंलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिले नेभिगेसन बारको तल्लो दायाँमा "+" आइकन चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि थिच्नुहोस् "पुस्तकालय" तपाईंले अपलोड गर्नुहुने भिडियो छनौट गर्न। दोस्रो प्रेस "अर्को" जुन माथि दायाँ र त्यसपछि अवस्थित छ "ट्रिम" स्क्रीनको तल।
अब तपाईंले थप भिडियो क्लिपहरू छनौट गर्न फेरि स्क्रिनको तल "+" आइकन थिच्नु पर्छ र छुनुहोस् "समाप्त।" त्यसोभए तपाइँ तपाइँको मनपर्दो क्लिप छान्नु पर्छ ट्रिम गर्न वा तिनीहरूलाई फरक क्रमबद्ध गर्न। एक पटक तपाईंले आफ्नो भिडियो भेला गरेपछि तपाईं यसलाई साझा गर्न सक्नुहुनेछ जहिले तपाईं गर्नुहुन्छ।
बहु क्लिपबाट भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
"+" आइकन थिच्नुहोस् तपाईंले स्क्रीनको फेदमा फेला पार्नुहुनेछ, त्यस पछि "भिडियो" थिच्नुहोस् र रेकर्डि start सुरू गर्न वृत्तलाई छुनुहोस्। त्यसोभए, तपाईंले धेरै क्लिपहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले आफूले गरिरहनु भएको पज गर्न तपाईंको औंठी रेकर्डिंग सर्कलबाट हटाउनुपर्नेछ, त्यसपछि फेरि थिच्नुहोस् र भिडियोको साथ जारी राख्न यसलाई समात्नुहोस्।
यदि तपाईं क्लिप मेटाउन चाहानुहुन्छ भने थिच्नुहोस् "हटाउनुहोस्" र अपरेशन समाप्त गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
जो इंस्टाग्राममा मेरो भिडियोहरू हेर्छ उसको लागि आवाज बिना भिडियो साझेदारी गर्नुहोस्
कहिलेकाँही तपाईं तिनीहरूसँग अडियो बिना भिडियोहरू साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ, र इन्स्टाग्राममा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले उनीहरूलाई अवलोकन गर्छन्। वास्तवमा भिडियो ध्वनि बिना इन्स्टाग्राममा प्ले गर्दछ पूर्वनिर्धारित द्वारा
ध्वनी बिना भिडियो बनाउनको लागि तपाईंले स्क्रीनको तल अवस्थित रहेको "+" आइकनमा छुनुहोस् र त्यसपछि तपाईंले अपलोड गर्न चाहानुभएको भिडियो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ "अर्को", त्यसपछि स्क्रिनको शीर्षमा भोल्युम नियन्त्रण आइकन थिच्नुहोस् ताकि तपाईं भिडियोबाट ध्वनि हटाउन सक्नुहुनेछ।
यो विकल्प यो इंस्टाग्राम कथाहरूका साथ पनि गर्न सकिन्छ, एकचोटि तपाईंले भिडियो रेकर्ड गर्नुभएपछि, रेकर्डिंग म्यूट गर्न सक्षम हुन स्क्रिनको माथिल्लो भागमा अवस्थित भोल्यूम नियन्त्रण आइकनमा थिच्नुहोस्।
तपाईंको ह्यान्ड्स-फ्रि कथाहरूको लागि भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
सायद तिनीहरू मध्ये केहीको लागि रेकर्डि throughoutमा बटन थिचिराख्नु थोरै दिक्क लाग्न सक्छ, यस कारण इन्स्टाग्राम यसको निरन्तर नवीनतामा, म ह्यान्ड्स-फ्रि मोड समावेश गर्दछु। थप रूपमा, यस प्रकार्यले फ्रन्ट वा रियर क्यामेरामा स्विच गर्ने कार्यहरू सुविधा पुर्‍याउँदछ, यदि तपाईं रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने।
एक ह्यान्ड्स-फ्रि भिडियो बनाउनका लागि तपाईले गृह स्क्रिनबाट स्वाइप गर्नुहोस् तपाईलाई इन्स्टाग्राम कथाहरू क्यामेरामा डाइरेक्ट गर्न, त्यसपछि विकल्पहरूमा जानुहोस् जुन तल्लो भागमा तपाइँ त्यहाँ पाउनुहुनेछ: सामान्य, बुमेरांग, ह्यान्ड्सफ्री र उनलाई थिच्नुहोस्। तपाईंले "ह्यान्ड्स फ्री" विकल्प छनौट गरेपछि रेकर्डि start सुरू गर्न तपाईंले बटन छुनु पर्छ। एक पटक तपाईं भिडियो समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ रनआउट गर्न अधिकतम समयको लागि कुर्नुहोस् वा फेरि सर्कल थिच्नुहोस्।
तपाईं आफ्नो भिडियोमा पाठ थप्न सक्नुहुनेछ अधिक रचनात्मकता प्रदर्शन गर्न वा तपाईंलाई साझा गर्न चाहानुभएको जानकारीलाई राम्रोसँग बुझ्न। तपाईं पनि थप्न सक्नुहुन्छ पर्चा कि तपाईं थप भिडियो को लागी निजीकृत गर्न चाहानुहुन्छ ईन्स्ट्रामा स्टोरीहरूमा, स्वतन्त्र र कुनै प्रतिबन्ध बिना।
फोटोहरू इन्स्टाग्राममा फाइल गरिएका छन्